को भन्न सक्छ ?
नीलो छ आकाश<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
भन लौ तिमी
को गन्न सक्छ ?
झरेर त्यति नै
उठेको छ हिमाल
पग्लेर जान्छ भएर पानी
बिछोड़ मात्र हो कि !
यो जिन्दगानी ।
किन छल्कँदैछ ?
भित्रभित्र मन यो
किन सल्कँदैछ ?
सागर तिमी हौ
म हुँ किनारा
अझ भन्न सक्छ ?
जति भाव पोख्छु
कथा हुन्छ आफ्नै
जति गीत लेख्छु
व्यथा हुन्छ आफ्नै
तिमी छैनौ भनेर
जति जोड़न खोज्छु
उति विछिन्न हुन्छ
जति आफ्नो भन्छु
उति भिन्न हुन्र्छ ।
किन मुस्कान छैन?
संगै हिड़ने बाटो भिरालो भएछ
अहिले फेरि आइ भँगालो भएछ
मिल्दैन कुनै दिन भएर दोभान